Mose ne Aaron kɔɔ Farao anim (1-5)
Nhyɛso no mu yɛɛ den (6-18)
Israelfo no de ho sobo bɔɔ Mose ne Aaron (19-23)
5 Akyiri yi, Mose ne Aaron kɔɔ Farao nkyɛn kɔka kyerɛɛ no sɛ: “Israel Nyankopɔn Yehowa se, ‘Ma me nkurɔfo nkɔ na wonkodi m’afahyɛ wɔ sare so.’” 2 Nanso Farao kae sɛ: “Hena ne Yehowa,+ na matie no ama Israel akɔ?+ Minnim Yehowa biara, na Israelfo nso, meremma wɔnkɔ.”+ 3 Nanso wɔkae sɛ: “Hebrifo Nyankopɔn no ne yɛn akasa. Yɛsrɛ wo, yɛpɛ sɛ yɛde nnansa tu kwan kɔbɔ afɔre wɔ sare so ma Yehowa yɛn Nyankopɔn;+ anyɛ saa a, ɔde yare anaa sekan bɛba yɛn so.” 4 Ɛnna Egypt hene ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Mose ne Aaron, adɛn nti na moama nkurɔfo no agyae wɔn adwuma agu hɔ? Monkɔhwɛ so nyɛ mo adwuma!”*+ 5 Farao toaa so sɛ: “Hwɛ nnipa dodow a wɔreyɛ adwuma wɔ asaase no so. Nanso mopɛ sɛ wogyae adwuma a wɔreyɛ no.” 6 Enti da no ara, Farao ka kyerɛɛ adwuma so ahwɛfo ne wɔn a wɔdeda adwuma ano no sɛ: 7 “Mommma nkurɔfo no sare a wɔde bɛyɛ birikisi bio.+ Ɛsɛ sɛ wɔn ankasa kɔhwehwɛ sare. 8 Nanso momma wɔnyɛ birikisi dodow a wɔyɛ daa no. Monntew so mmma wɔn, efisɛ wɔregow wɔn ho.* Ɛno nti na wɔresu sɛ, ‘Yɛpɛ sɛ yɛkɔ, yɛpɛ sɛ yɛkɔbɔ afɔre ma yɛn Nyankopɔn!’ 9 Mummia adwuma no mu mma wɔn na adwuma no nnɔɔso mma wɔn, na wɔankotie nnaadaasɛm biara.” 10 Enti adwuma so ahwɛfo+ ne wɔn a wɔdeda adwuma ano no kɔka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Asɛm a Farao aka ne sɛ, ‘Meremma mo sare bio. 11 Baabi a mubenya sare biara, mo ara monkɔhwehwɛ, nanso mo adwuma no de, yɛrentew so ketewaa bi mpo.’” 12 Enti nkurɔfo no tew wɔn ho guu mu kɔboaboaa sare* ano wɔ Egypt asaase so baabiara. 13 Na adwuma so ahwɛfo no kɔɔ so hyɛɛ wɔn sɛ: “Adwuma a wɔatwa ama obiara sɛ da biara ɔnyɛ no, monyɛ no te sɛ bere a na wɔma mo sare no.” 14 Afei nso, Farao adwuma so ahwɛfo no hwee+ Israelfo a wɔdeda adwuma ano no, na wobisaa wɔn sɛ: “Adɛn nti na nnɛra ne nnɛ, birikisi dodow a daa mutwa no, moantwa anwie?” 15 Ɛnna Israelfo a wɔdeda adwuma ano no kɔɔ Farao nkyɛn kɔkaa wɔn haw kyerɛɛ no sɛ: “Adɛn nti na woreyɛ wo nkoa saa? 16 Wɔmmaa wo nkoa sare biara, nso wɔka kyerɛ yɛn sɛ, ‘Monyɛ birikisi!’ Wɔhwe yɛn, nanso mfomso no fi wo nkurɔfo no.” 17 Ɛnna ɔkae sɛ: “Moregow mo ho,* moregow mo ho!*+ Ɛno ara nti na moreka sɛ, ‘Yɛpɛ sɛ yɛkɔbɔ afɔre ma Yehowa.’+ 18 Monkɔ nkɔyɛ adwuma! Wɔremma mo sare biara, nanso birikisi dodow a yɛaka sɛ muntwa no, ɛno ara na mubetwa.” 19 Bere a ɔkae sɛ: “Monntew birikisi a moyɛ no daa no so baako mpo” no, Israelfo a wɔdeda adwuma ano no hui sɛ asɛm ato wɔn. 20 Afei bere a wofi Farao hɔ reba no, wɔbɛtoo Mose ne Aaron sɛ wogyina hɔ retwɛn wɔn. 21 Ɛhɔ ara na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Yehowa nhwɛ na ɔntwe mo aso, efisɛ moama Farao ne ne nkoa bo afuw yɛn,* na mode sekan ahyɛ wɔn nsam sɛ wɔmfa nkunkum yɛn.”+ 22 Ɛnna Mose bɔɔ Yehowa mpae sɛ: “Yehowa, adɛn nti na woama awie nkurɔfo yi bɔne? Adɛn nti na wosomaa me? 23 Efi bere a mekɔɔ Farao nkyɛn kɔkasae wɔ wo din mu no,+ wateetee nkurɔfo yi asen kan no mpo,+ nanso wunnyee wo nkurɔfo.”+
^ Anaa “Monkɔhwɛ so nsoa mo nnesoa.”
^ Anaa “wɔyɛ anihafo.”
^ Anaa “Moyɛ anihafo.”
^ Anaa “moama yɛn ho abɔn Farao ne ne nkoa.”